Home News Shirka Brussels Axmed Madoobe ma lagu Bahdilay Misa halagu barto ayeey...
Shirka Brussels Axmed Madoobe ma lagu Bahdilay Misa halagu barto ayeey ka aheed+Kooxda Qiyaano qaran oo !!
Hogaamiyaha maamul goboleedka Jubaland Axmed madoobe iyo xubnihii la socday ayaa ka shalay baxay shirki ka socday magaalada Brussels ka kadib markii ay u kasoo horjeesteen ajandayaasha shirka oo ay sheegeen in wax laga bedelay sidii horay la isugu ogaa.
Dhacdada kadib waxaa soo farageliayay xubno ka socday dowladda federaalka iyo beesha caalamka si ay u xaliyaan.
Dhabcan sida xaqiiqda ah beesha caalamka uma soo faragelin in ay ku qanciyaan Axmed Madoobe inuu shirka ka qeyb galo, lkn waa fariin ay caalamka ku tusinayaan in somaali weli yihiin umad kala daadsan,aanan wada jir ku hashiin dhexdooda, is xalin karin, fara gelin shisheeyana aan ka maarmin.
Waa nasiib darro weyn oo heystay siyaasiyiinta soomalida inaysan dhexdooda waxba kala maqlin, waxna isku ogoleen lkn ay shisheeyahay kale u dhega nugulyihiin, tiiyoo ay dheertahay marka khilaaf soo kala dhexgalo inaysan hashiin karin inta shisheeyaha kasoo faragelinayo.
Previous articleJaaliyadda Soomaaliyeed Ee Mareeykanka oo taabid u sheegay in aysan la Kulmi Doonin Hadii uu Yimaado Minnesota (sababta?)
Next articleCiidamada Maamulka Jubbaland oo Gacanta ku soo dhigtay Wiil Gowracay Aabihiis..
Mid ka mid ah hoggaanka ururka Ictisaam oo ku fashilmay gacan...